I-Linux yandisa ubukhona bayo kuma-desktops kusuka ku-1% kuye ku-1.41% | Kusuka kuLinux
Perseus | | I-GNU / Linux, Izaziso
Lapho ngifunda okuphakelayo kwami ​​namuhla, ngithola lezi zindaba ezinhle kakhulu (ezingimnandi ngokwami ​​ngokuphelele namhlanje ekuseni: D), engizihumushele nina nonke ...
Ngokusho kombiko, ukutholakala kweLinux kwideskithophu bekukhuphuka kusukela ehlobo eledlule. Umbiko we Netmarketshare kukhombisa ukuthi ukusetshenziswa kweLinux kudeskithophu kukhuphukile kusuka kusabelo esingu-1% ngoDisemba 2010 kuya kusabelo esingu-1.41% ngoDisemba 2011. Imininingwane evela kuNetMarketShare ikhombisile ukuthi ngaphambi kuka-2010 iLinux kwideskithophu yayijwayele ukuba seduzane 1%. Lesi sifundazwe sibukeka siqale ngo-Agasti 2011.
Ngokuqondene neMicrosoft Windows, ukuqhathanisa phakathi kukaDisemba 2010 noDisemba 2011 kukhombisa ukwehla okuncane kusuka ku-93.78% kuya ku-92.23% neMac OS X ngokunyuka okuncane kusuka ku-5.21% kuye ku-6.36%. Emakethe yezingcingo ezihambayo, i-iOS isaphethe ama-52.10% emakethe, ilandelwe yiJava ME ngo-21.27% ne-Android eno-16.29%.
Nayi igrafu yalezi ziqhathaniso:
Ucabangani? Yabelana nathi ngombono wakho wokuthi kungani ucabanga ukuthi lesi simo kufanelekile 😉
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Linux yandisa ukutholakala kwayo kuma-desktops kusuka ku-1% kuya ku-1.41%
Kuze kube ngo-Okthoba 2001, iLinux ibizinzile phakathi kuka-0,87 no-1,19%
Bayithathaphi le datha? Ngishaywe i-osx ngoba yize ithandwa e-United States, cishe ayikho kwezinye izingxenye zomhlaba. Futhi iphesenti le-iOS nalo libonakala lisolisa kimi, kepha kuzoba njalo ngoba ezweni lami i-Android ithandwa kakhulu.
Kulokho engakuthola kwaba okulandelayo:
Imininingwane evela kuzicelo zeNet, okungathintwa kuyo ngensizakalo yayo yeNetMarketShare, iveza izibalo ezivela kumawebhusayithi angaphezu kwama-40.000, amele ukuvakasha okuyingqayizivele kwezigidi eziyi-160 ngenyanga.
Ngokuphambene nalokho, kwezinye izingxenye zomhlaba kuyathandwa ngokuqhathaniswa.
ESpain, ngihlangane nabantu ababili kuphela abane-mac osx, ama-iphone ngakolunye uhlangothi kuyo yonke indawo, yingakho ukulayishwa kubonakala kusolisa kimi, kepha hheyi.
Yebo, ngicabanga ukuthi ukunqoba ideskithophu kuseyi-utopia, iLinux kufanele ifise ukuba yileyo "ndlela yesithathu". Kunoma ikuphi, kufanele kuthiwe ukusatshalaliswa okufana neLinux Mint ne-Ubuntu kwenza lukhulu ukunweba ideskithophu. Kuze kube muva nje, bekubonakala kungacabangi ukuthi abantu abathile bangagxumela ekuzameni i-Linux, kepha kubonakala sengathi abaningi manje sebephelelwe ukwesaba. Lezi yizindaba ezinhle, ngaphandle kokungabaza.
Akukona "ukunqoba ideski" umngani uJosemas; uD
Iqiniso ukuthi anginandaba ukuthi iLinux inwetshiwe noma cha, ukuze kamuva ngibe njengabangane bethu baseHasefroch noma okuthile okunjalo, kungcono ukuthi konke kuhlale kunjengoba kunjalo
Kokuthize ngiyavuma: Uma ukusebenzisa i-Linux kungenzi mehluko, ngaphezu kwezici zayo zobuchwepheshe kanye negama, ngabe kwenza mehluko muni ukuthi bayisebenzisa kanjani? Bengihlala ngikholelwa ukuthi ukusebenzisa iLinux kungasho izinto eziningi ezahlukahlukene kumsebenzisi ngamunye, kepha okubalulekile ukuthi kungenye indlela, isenzo sokwenqaba imfundiso kanye nokuvumelana, nganoma yiziphi izinhlobo zayo.
Ukufisa ukuthi abantu abaningi bafunde uNietzsche, uKant, uRulfo, Sabato, Freud, Cortazar, Marx no-Engels, de Beauvoir, Dostoevsky, Poe, Villoro, njll. njll., Akufanele kuthengiswe kakhulu, kepha ukubona umhlaba ngenye indlela.
Usho kangcono kunanoma ngubani umngani:
[…] Ukubheka umhlaba ngenye indlela […]
Ngingavele ngengeze noma ngicacise ukuthi: ungaboni umhlaba ngenye indlela kusuka ekubukeni kwesipiliyoni, kepha kunalokho, kusuka endleleni engcono yokuphila 😉
Yilokhu okushiwo yiGNU / Linux, bangaki kithi abanezimpilo ezingashintshiwe zaba ngcono ngu "Tuxito"? 😀
Ngendlela, ngiyabonga kakhulu ngokuphawula 😉
Kuyaxaka, kepha futhi kufanele ucabangele imvelo, endaweni engihlala kuyo yabangane nabantu engibaziyo ngibona ama-Android amaningi kunezingcingo ze-Apple.
Vele akunjalo, angicabangi kanjalo. Kepha bengilokhu ngizwa ukuthi iLinux kufanele ifinyelele kuwo wonke ama-desktops selokhu ngiqale ukuyisebenzisa, emuva ku-97 (bheka ukuthi lina, hehe). Emuva ngaleso sikhathi, lapho abasebenzi befaka iRedhat 4.1, kwathiwa "izothatha umhlaba" futhi "vumela iWindows inyakaze." Ngisakhumbula lapho kwakufanele ngihlanganise i-GNOME 0.2 ukuze ngikwazi ukuyisebenzisa njengedeskithophu, Noma kunjalo, uma sibheka ukusatshalaliswa okufana neLinux Mint kusobala ukuthi kuningi osekuzuziwe kusukela lapho, asikwazi ukukhononda kakhulu.
Kunoma ikuphi, kubonakala sengathi iLinux ifinyelele kumsebenzisi, kepha ngomnyango ongemuva nge-Android. Impela, yiLinux leyo, kepha yiGNU encane ...
Huuu, ngaleso sikhathi ngangidlala uMario bros usuku lonke 😀
Esikhathini esingengakanani esidlule kwebiwe incwadi yokubhalela umngani kumngani, ngaze ngathenga entsha ngavusa i-pc eyayiyibeke ku-xp, ngifaka Ubuntu kuyo, ngangihlaba umxhwele ngobunye, inkinga kuphela ku-flash ye-adobe, umshini omncane Ayinalo ikhadi levidiyo futhi aliliphathi kahle, lokhu ngicabanga ukuthi kuyisibonelo esilula sokuthi kungani kunama-PC amaningi ne-Linux, iMicrosoft ihlala ikhipha izibuyekezo ezinciphisa uhlelo noma amasistimu afuna izinsizakusebenza eziningi, njengoba imishini ihamba njengoba ingasasebenzi, i-linux ivela njengokuwukuphela kwenketho, ngaphezu kwalokho manje ilula kakhulu
Kuyaxaka, namuhla i-XP (ivuselelwe) ilula kakhulu kune-Ubuntu (ebuyekezwe kakhulu nge-Unity futhi angifuni ngisho nokucabanga ukuthi kuziwa ngani (ngokwesibonelo i-HUD).
Ngicabanga ukuthi kuncike kakhulu emshinini, ngihlanze i-xp nge-ccleaner, ngaphezu kokuyihlambalaza, nakho konke ukunakekelwa okwenziwe (usuku lonke ukuphika nge-xp, ngishintshele ku-linux ukuze ngingabe ngisadlula kulezi zinto, Kepha noma kunjalo, ngaphambi kokuba ilayishwe ngemizuzu eyi-10, ngemuva kwesondlo manje ilayisha ngo-2). Ubuntu bakhiphe i-banshee yokuncika kwe-clementine, i-gbrainy ne-mono, futhi ngalobo bunye i-2d bunoketshezi oluningi, ilayisha kumasekhondi angama-30 futhi idle ama-325 mb we-ram uma ngokuzayo idinga ukusinda ngezinsizakusebenza, ngibeka i-xubuntu futhi ngizosebenzisa esinye isikhathi futhi
Ama-laptops amadala abantu abasenkingeni
welulekwa ngabangane abahlakaniphile
ukwenza ngcono ukusebenza
ngisho nasemishinini emisha ene-MS Windows OS.
Lokhu kuhlanganiswa kukahulumeni kwama-desktops kumakhompyutha amadala kuya eLinux ngezizathu ezifanayo.
Ngisebenzisa i-mint12 ne-Mate, lapho ngisebenzisa i-chakra iyayithola, futhi ngibona amanye ama-mints etholakele - ngifake ama-desktops amaningi * ubuntu-desktop uma lokho kungathatha isinqumo.
Kufanele ushintshe i-UserAgent
Ngokubona kwami ​​ngicabanga ukuthi izinombolo ze-osX neLinux ziphansi kakhulu kunalokho engikubona endaweni engikuyo. Akungabazeki ukuthi okudonsa kakhulu ezibalweni yizinkampani eziqhubeka nokusebenzisa iWindows eningi.
Ngizokwenza kube lula kakhulu. Ucabanga ukuthi bangaki abantu abasebenzisa i-mac osx eChina?
Yebo, sengivele ngakusho konke xd
Yebo, njengakuyo yonke indawo, abaklami bezithombe nama-pringaos amane afuna ukuzizwa epholile futhi ehlukile
Akuthandi nalokhu. Ngazi abantu abangaphezu koyedwa abathenga iMac, ngoba nje omunye umuntu emtshele ukuthi ibingcono kakhulu ... futhi u-voila, uyithengile.
Yebo, lokho ama-pringaos, futhi yilokho engikwenze ngosuku lwakhe nge-Mac yamabhola
Noma kunini lapho kuphuma lolu hlobo lwedatha, ngifisa ukwazi indlela esetshenzisiwe, isampula noma inkomba yabantu kanye nokwakheka kwezibalo okusetshenzisiwe, kepha akuveli nhlobo.
Ngicabanga ukuthi yinto efana naleyo
A: abasebenzisi be-linux = 1%
B: abasebenzisi be-linux abafaka ubuntu ezinkampanini zabo zabangani + kanye nohulumeni abafuna ukonga amalayisense = 0.41%
A + B = 1.41%…. Futhi ikhula
I-Google nokuhlonipha kwayo abasebenzisi